राष्ट्रपतिकाे पद धरापमा, ओलीका कारण सबैकाे ताराेमा राष्ट्रपति, सामाजिक सञ्जालमा सुन्नै नसकिने गाली बेइज्यती
May 27, 2021 N88LeaveaComment on राष्ट्रपतिकाे पद धरापमा, ओलीका कारण सबैकाे ताराेमा राष्ट्रपति, सामाजिक सञ्जालमा सुन्नै नसकिने गाली बेइज्यती
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। यसअघि पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संसद् विघटनलाई फागुन ११ मा सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो। अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको थियो। त्यसबेला झण्डै दुई महिना चलेको बहसमा बारम्बार प्रधानमन्त्री ओलीको नियतमाथि विपक्षी कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न […]
अन्ततः बामदेवले खुट्टा उचाले, माधव-खनाललाई दिए चक्मा !
May 27, 2021 N88LeaveaComment on अन्ततः बामदेवले खुट्टा उचाले, माधव-खनाललाई दिए चक्मा !
काठमाडौं। यति बेला नेकपा एमाले विभाजनको संघारमा छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लागि परेका माधवकुमार नेपाल सफल हुन नसकेपछि उनी आफै विभाजनको बाटोमा लागेका छन् । यद्यपि, पार्टीका अर्का शक्शिाली नेता बामदेव गौतम भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रहने संकेत गरेका छन् । अहिलेसम्म नेता गौतम तटस्थ नै रहेको पाइएपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीसँगै […]
ठाकुरकाे एक कदमले ब्युँतियो राजपा ! माधव प्रचण्ड देखि बाबुराम-उपेन्द्रसम्मको निद हराम
May 27, 2021 N88LeaveaComment on ठाकुरकाे एक कदमले ब्युँतियो राजपा ! माधव प्रचण्ड देखि बाबुराम-उपेन्द्रसम्मको निद हराम
काठमाडाैं । जनता समाज पार्टी (जसपा) कार्यकारिणी समितिमा बहुमत पुर्‍याउन नसके राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल ब्युँताउने रणनीतिमा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष जुटेको छ। ठाकुर पक्षका नेताहरू सकेसम्म कार्यकारिणीमा बहुमत जुटाउन प्रयास गर्ने, नसके राजपा ब्युँताउने आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन्। कार्यकारिणीमा बहुमत जुटाउन सो पक्षले नेता अशोक राईसँग गम्भीर चरणको कुराकानी गर्ने भएका छन्। कार्यकारिणीमा […]
May 27, 2021 N88LeaveaComment on मतपत्र च्यातेर प्रचण्डले छोरी जिताएको चितवनका जनताले बिर्सेका छैनन् : देवी ज्ञवाली
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले प्रचण्डले मतपत्र च्यातेर छोरी जिताएको जितवनका जनताले नबिर्सेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माडीको आयोजनामा माडीमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे बोलेका हुन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ज्ञवालीले पद र स्वार्थका लागि प्रचण्ड र […]
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठाडाे चुनाैति दिने ‘हिम्मलवाली’ सांसद चाैधरी
May 27, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठाडाे चुनाैति दिने ‘हिम्मलवाली’ सांसद चाैधरी
काठमाडौं । एमालेकी नेतृ एवम् विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद लक्ष्मी चौधरीले नागरिकतासँग पद साटेका प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले देश समाप्त पार्न लागेको आरोप लगाएकी छिन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेतृ चौधरीले एमालेका २७ जना सांसदलाई कारबाही गरेर देखाउन ओलीलाई चुनौती दिएकी छिन् । उनले मन नपरेकाहरूलाई छानीछानी कारबाही गरेको भन्दै आक्रोश पोखेकी छिन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई […]
सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडि नै सभामुखले संसद बैठक डाक्ने
May 27, 2021 N88LeaveaComment on सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडि नै सभामुखले संसद बैठक डाक्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ‘असाधारण निर्णय’ लिनसक्ने बताएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा कानुनका जानकारको कुरा सुनेपछि उनीहरुलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन्। ‘आवश्यक पर्दा देश जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि नेपाली जनताले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो भनेको धेरै असाधारण र त्यो […]
मोटी श्रीमतीले थिच्दा श्रीमानको मृत्यु !
May 27, 2021 N88LeaveaComment on मोटी श्रीमतीले थिच्दा श्रीमानको मृत्यु !
एजेन्सी । इन्टरनेटकाे जमाना छ देश दुनियाका खबर थाहा पाउन पाइएकाे छ । हालै एउटा यस्ताे खबर सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हाेइन संसारका ठूला मिडियामा पनि स्पेस पाइरहेकाे छ जुन दुःखद छ र पनि हाँसाे उठ्दाे पनि छ । खबर सुनेर हाँस्नु कि दुखी हुनु । रसियामा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । श्रीमतीले आफ्नै श्रीमानलाई […]
May 27, 2021 N88LeaveaComment on धरानमा प्रहरी चौकीमा खु कु री हा ना हान, असई घाइते
विराटनगर । धरानमा प्रहरी चौकीमा स्थानीय युवाको दुई समूहबीच ‘खु ‘कु ‘री’ हा ना हान भएको छ । दुई समूहबीच भएको ‘झ’ ‘ड ‘प रोक्न खोज्दा चौकीका इन्चार्ज घाइते भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी कमल थापाका अनुसार एउटा समूह उजुरी लेख्न आएको थियो । उनले भने, पछिपछि आएको अर्काे समूहले चौकी भित्र […]
May 27, 2021 N88LeaveaComment on ३ देशका लागि उडान खुला गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडाैं । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ३ देशमा साताको एक दिन नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले जेठ १८ गतेदेखि चीन, कतार र टर्कीका लागि सातामा एक दिन नियमित उडान खोल्ने निर्णय गरेको हो । कतारको राजधानी दोहा, टर्कीको इस्तानबुल र चीनका कुनै पनि स्थानमा दोहोरो अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको […]
May 27, 2021 N88LeaveaComment on माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने नेपाल-खनालकाे घोषणा, एकल अध्यक्षमा प्रचण्ड !
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले दल खोल्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको छि’नोफा’नोलाई हेर्ने या अगाडि बढ्ने भन्नेबारे उनले निकटस्थसँग परामर्श गरिरहेको बुझिएको छ । कतिपयले अहिले नै बढ्नुपर्ने त कतिपयले सर्वोच्चको फैसलापछि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेपाल सर्वोच्चको आदेश पर्खने पक्षमा छन् । त्यसपछि […]